Visual Basic 6.0 - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Programming Languages -2» Visual Basic » Softwares များ
24-03-2007, 02:47 AM
အားလုံး သိကြပါတယ်။ အသုံးလိုအပ်နေတဲ့ ရှာရ ခက်နေတဲ့ သူတွေ အတွက်ပါ။
စန်းမြို့, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), minthike, thureinsoe
21-02-2008, 10:07 PM
ပြန်စာ - Visual Basic 6.0
ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ခြား Link ကနေ ပြန်တင်ပေးပါလား .....
Last edited by phoelapyaee; 21-02-2008 at 10:08 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ phoelapyaee အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
23-02-2008, 04:07 AM
tlopp အတွက်ကျနော် VB6 ကိုလိုက်ရှာတာ ရက်ပစ်လင့်ခ်တွေချည်းပဲတွေ့တယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 70 MB လောက်ရှိတော့ ပြန်တင်ပေးဖို့ ကျနော့်အတွက်အဆင်မပြေဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုသွားတွေ့တယ်။ VB6ရဲ့ Portable Version ပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း မယုံနိုင်စရာ6MB ပဲရှိတယ်။ ကျနော်စမ်းကြည့်သလောက် Help file တွေကလွဲလို့ ဖူးဗားရှင်းအတိုင်း အကုန်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကို ဒီလောက်သေးသွားအောင် Portable ဘယ်လိုထုတ်သလဲဆိုတာ အခုထိစဉ်းစားလို့မရဘူးဗျာ။ တကယ်မိုက်တဲ့ နည်းပညာပဲ။ Portable လုပ်တဲ့လူတွေက ဒီလောက်သေးအောင် ပြန်ထုတ်နိုင်ရင် သူ့မူရင်းကုမ္ပဏီတွေကကော ဘာဖြစ်လို့ကြီးအောင် လုပ်ရသလဲဆိုတာ... ကျနော်တွေးရခက်နေတာပါ။ ကဲ.. ကဲ.. လေကြောရှည်နေတာနဲ့ လိုရင်းမရောက်ဘူး။ Portable VB6 ကိုအောက်မှာယူပါဗျာ။
(Myo Min zaw ပြန်တင်ပေးထားတဲ့လင့်ခ်ပါ)
သူ့ကို run လိုက်ရင် box တစ်ခုတက်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ.. အရင်ဆုံး Reg Key ဆိုတာကို နှိပ်ရမယ်။ Registry မှာသွားထည့်မလားလို့ မေးလိမ့်မယ်။ Yes နှစ်ခါပြောပါ။ ပြီးမှ.. Run Visual Basic6ဆိုတာကိုနှိပ်ရပါမယ်။ ကိုရေခါးရဲ့ လက်ချာတွေကိုတော့.. ဒီကောင်နဲ့ရေးလို့မရဘူးနော်။ VB 2005 or 2008 ဗားရှင်းတွေနဲ့မှရမယ်။
တစ်လက်ဆတည်း မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကအခမဲ့ပေးသုံးတဲ့ Visual Studio 2008 and 2005 Express Version တွေအတွက် လင့်ခ်တွေကိုပါ ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခမဲ့ဗားရှင်းတွေဆိုပေမယ့် တော်ရုံတန်ရုံလုပ်ငန်းသုံး ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဖန်တီးဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။
Visual Studio 2008 Express Edition(ISO) 895 MB
ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုချင်းစီလိုချင်ရင်တော့ (VB, VC#, etc) ... ဒီမှာ ဒေါင်းလုတ်ချနိုင်ပါတယ်။
Visual Basic 2005 Express Edition(ISO) 436 MB
ISO ဖိုင်တွေကို IsoBuster နဲ့ဘယ်လိုဖြည်ရသလဲဆိုတာကိုလည်း အဲဒီဆိုက် မှာ တစ်ခါတည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ စမ်းသပ်ကြည့်ပါဦး။
Last edited by tu tu; 02-02-2010 at 11:17 PM.. Reason: လင့်ခ်ပြင်ရန်
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ ကိုပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စန်းမြို့, မိုးတိန်, သန့်ဇင်ဌေး, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်ရိုး, ကြယ်စင်ငယ်, komin120, kyarphyu, minthike, omnitek team, pyaephyolin615
23-02-2008, 05:06 AM
ဟုတ်တယ်ဗျ။ portable တော်တော်ဖြစ်တယ်။iso တွေကို WinRar နဲ့ ဖြည်လဲရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Daemon Tool ကဲ့သို့သော Virtual Drive တွေနဲ့မောင်းရင်တော့ original CD/DVD အတိုင်း ရမှာပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ yeakharr အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စန်းမြို့, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), minthike
ကို Ye Naung ပေးတာနဲ့ ကိုပိုင် ပေးတာက တူတူပဲလားဗျ။ visual basic 6.0 from http://rapidshare.de/files/24387080/...Basic.rar.html , အဲဒါ download မရဘူး။ ကိုပိုင်ပေးတဲ့ဟာ http://mihd.net/z3bfep အဲဒါတော့ download လုပ်လို့ရတယ်။ အတူတူပဲလား ?? ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကိုအောင်ခန့် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကိုအောင်ခန့်
လင့်သေနေလို့ ကိုပိုင်ပြန်တင်ပေးထားတာပါ။ အတူတူပါပဲ။
ကိုပိုင်တင်ပေးတာက portable version ပါ။
ပို့စ် 41 ခုအတွက် 96 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Visual Basic 6.0 က Download လုပ်လို့ရဘူးဖြစ်နေတယ်..ပြန်တင်ပေးပါလာနော်..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ mayoomoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit mayoomoe's homepage!
Find More Posts by mayoomoe
ပို့စ်နံပါတ်(၃)က mihd လင့်ခ်က ကောင်းပါသေးတယ်။
မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), minthike, moe_poung
23-12-2009, 07:25 AM
မတူးတူးရေ ကျနော်လည်း ဒေါင်းလို့ ရဘူးဗျ... file expired လို့ပြနေတယ် ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုပိုင်တင်ပေးထားတဲ့ portable လေး ပြန်စစ်ပေးပါအုန်း. ကျေးဇူး..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ moe_poung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by moe_poung
ကိုမိုးပေါင်း ရေ မတူးတူး မရှိလို့ ကျနော်ရှာတွေ့တာလေး တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျ
အဆင်ပြေပါ့မလားပဲ ...Visual Basic 6.0 Portable တဲ့
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ Myo Min Zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), chitnyimalay, minthike, phyomyintthein, phyothuhein, tu tu, zoard
27-01-2010, 05:21 AM
ကျွန်တော် portable ကိုသုံးတာ error တွေနဲ့ချည်းကြုံနေရလို့ပါ... ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် full version လေးများတင်ပေးပါလားဗျာ... ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်...
အလွယ်တကူရှာတွေ့တဲ့ Microsoft Visual Studio 6.0 လင့်ခ်တွေပဲ ကူးပေးလိုက်ပါတယ်။
အထဲက ကုလားစာနဲ့ ရေးထားတဲ့ notepad ထဲမှာ product key ပါပါတယ်။
Install လုပ်ရင် အဲဒါ ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
(Myo Min Zaw ပြန်တင်ပေးထားတဲ့လင့်ခ်ပါ။)
Last edited by tu tu; 02-02-2010 at 11:15 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခွန်ညီး, စန်းမြို့, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), khit100, minthike, Myo Min Zaw, omnitek team
ပို့စ် 59 ခုအတွက် 119 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မ သူသူ ရေ ကျေးဇူးပြုပြီ part 1 လေးကိုဒီပြင်upload ကနေတင်ပေးပါလား ဒေါင်း လိုက်တိုင် ဖိုင်ဆိုက် မပြည့်ခင် ရပ်ရပ်သွားလို့ ပါ ဒီပြင် နှစ်ခုကတော့ ဒေါင်းတာ အဆင်ပြေပါတယ်
Last edited by tu tu; 02-02-2010 at 11:13 PM.. Reason: edit quote
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မင်းထက်လှိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မင်းထက်လှိုင်
Part 1 ကို မတုတု တို့ ကိုယ်စား တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Last edited by phyothuhein; 03-02-2010 at 03:51 PM..
မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), minthike, minthumon
တည်နေရာ: On Earth...
ပို့စ် 18 ခုအတွက် 41 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အစ်ကိုရေ ... Visual Basic6Guide ကောင်းကောင်းလေးတင်ပေးပါလား ? ဖြစ်နိုင်ရင် အစ်ကိုကိုယ်တိုင်ရေးလိုက် ပါလား ? ကျွန်တော်တကယ်လိုနေလို.ပါ...
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ louisflame88 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by louisflame88
vb6 အတွက် MSDN လေးကို ကူညီပေးကြပါဦး ခင်ဗျာ
အတော်လေး ဟောင်းနေပြီ ဖြစ်လို့ မတွေ့တော့တာလားမသိဘူး
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မင်း
Originally Posted by မင်း
vb6 အတွက် MSDN လေးကို ကူညီပေးကြပါဦး ခင်ဗျာ
ရန်ကုန်မှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ အနော်ရထာလမ်းနဲ့ ပန်းဆိုးတမ်းလမ်းထောင့်က active multimedia ဆိုင်အပေါ်ထပ်မှာ သွားရှာလို့ရတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ ဘယ်ရေစက်လဲမသိဘူး။ အဲဒီဆိုင်ရှင်နဲ့ အစေးမကပ်ဘူး။ သွားမေးလို့မရဘူး။ ဂလန့်ပြန်ပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ဘာသာရှာရတယ်။ မေးကြည့်ပါ။ မသိဘူးလို့ပြောရင် အပေါ်ထပ်ကိုတက်သွားပြီးရှာကြည့်ရှိတယ်။ အဟောင်းအကုန်နီးပါးရှိတယ်။ MSDN 98 နဲ့ 2000 က VB6နဲ့သုံးလို့ရတယ်။ MSDN 2002 နဲ့ 2003 ကတော့ VB6အတွက်ပါပေမယ့် Integrate လုပ်ပြီးသုံးလို့ရမရမသိဘူး။ ဒီအတိုင်းသုံးရင်တော့ရတယ်။ အဲဒီဆိုင်က Design ပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်တာတော်တော်များများကို မေးလို့ရတယ်။ ကျန်တာသိပ်မသိဘူး။
နောက် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးနားက ၂၉ လမ်းထိပ်က National CD မှာရှိတယ်။ ဆိုင်ထဲက အရောင်းကောင်တာက မိန်းကလေးတွေက ဘာမှမသိဘူး။ ရောင်းပဲရောင်းတတ်တာ။ ခွေအသစ်နဲ့လူဝယ်များတာတဲ့ခွေတွေပဲသိတယ်။ အသက် ၃၀ ဝန်းကျင် လူကြီးတစ်ယောက်ရှိရင်တော့ မေးကြည့်လိုက် သူသိတယ်။ အဲဒီဆိုင်မှာ လုံးဝ မေးလို့မရရင် သူတို့ဆီမှာ List ရှိတယ်။ စက်ထဲမှာရှာပေးပါလား လို့မေးကြည့်ပါ။ ရှာပေးရင်တော့ကျိန်းသေတွေ့မှာပဲ။ ကူးပြီးသားရှိမရှိသာ ကြည့်ရမှာ။ ကူးပေးပါလိမ့်မယ်။
နယ်မှာဆိုရင်တော့ မန္တလေးကလွဲရင် ရနိုင်ဖို့ အရမ်းနည်းတယ်။ ကျွန်တော် နယ်က ဆိုင်တွေရောက်ဖူးတယ်။ ၂၀၀၅ လောက်ကမှ စဖွင့်တဲ့ဆိုင်တွေပဲများတယ်။ အဟောင်းတွေသိပ်မရှိဘူး။
Download လုပ်ဖို့က ကျွန်တော်သိတဲ့ နေရာတွေက MSDN တွေက Dead Link တွေဖြစ်သွားပြီ။ ဆွဲလို့မရတော့ဘူး။ ၂၀၀၆ လောက်ကတည်းက Dead Link ဖြစ်သွားတဲ့ နေရာတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေလို့။ရတဲ့နေရာတွေက Torrent Download တွေဖြစ်နေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက Block လုပ်ထားတယ်။
Last edited by MegaWooer; 19-04-2011 at 12:58 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ MegaWooer အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်အောင်ဟိန်းအေး, bagothar85, minthike, tu tu
24-01-2012, 05:53 AM
ပြန်စာ - MSDN for Visual Basic 6.0
7 ZIP နဲ့ ဖြေနော်..WINRAR နဲ့ဆိုရင် မရဘူး...
အထဲမှာ Install လုပ်နည်းကော ပါတယ်...
မှတ်ချက်။ ။ နားမလည်ဘူး..torrent ကနေဒေါင်းပြီးတင်လိုက်တာ
Last edited by ko gyi aung; 24-01-2012 at 05:57 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ko gyi aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့ မရဘူး .... ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ... ကူညီပါအုံးနော် ... စိတ်မရှိပါနဲ့နော် ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ....
Complete Idiot's Guide to Visual Basic6kothu E-books များ407-11-2010 09:41 PM
Using Visual Basic6Special Edition kothu E-books များ212-07-2008 07:37 PM
Microsoft Visual Basic Design Patterns kothu E-books များ202-07-2008 04:54 PM
Programming Visual Basic for Palm OS kothu E-books များ022-05-2008 08:50 PM
Visual Basic for Electronics Engineering Application တေလေငှက် E-books များ009-05-2008 01:01 PM